Tsy manana firehan-kevitra politika fa misokatra ho an’ny sokajin’olona rehetra ka hanasana ny mponina tsy ankanavaka hiditra ao aminy. Tarigetra voizinay ny hoe : « Asa sy Dingana ho an’Analamahitsy Cité », ka hametrahanay io fokontany io ho maodely, hoy ny filohan’ny fikambanana Atoa Rakotoarivelo Jaques-Fréderic. Lafin-javatra maro no hisian’ny fiaraha-mientana sy fampandrosoana, toy ny ara-tsosialy, koltoraly, ara-piarahamonina. Misy ihany koa ny fiarovana sy fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fotodrafitrasa, ary tsy latsa-danja amin’izany ny fifanampiana, toy ny fampidirana ireo zaza sahirana an-tsekoly, fanoratana ny kopiany na koa fikarakarana ireo hanao kara-panondro. Noho ny fetin’ny asaramanitra, dia nampifaly sy nizara vatomamy miampy arendrina ho an’ny ankizy ny ADAC. Boky hatrany amin’ny 200 isa ho an’ny ankizy kilasy faha-6 ka hatramin’ny famaranana ihany koa no natolotra hapetraka ao amin’ny Tranombokin’ny fokontany.